အဓိကရုန်းနှိမ်နင်းရေးမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးလေ့ရှိတဲ့ မျက်ရည်ယိုဗုံးကို CS လို့ အတိုကောက်ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဓါတုပစ္စည်းကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ၂ ဦးရဲ့ နာမည် Corson နဲ့ Stoughton အတိုကောက်ကို အစွဲပြုခေါ်ဆိုတာပါ။ ဒီဓါတုဒြပ်ပေါင်းက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ။ အမေရိကန်စစ်တပ်က သဘာဝဝန်းကျင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသူရအောင်က အခုလို ရှင်းပြ ပါတယ်။
ဦးသူရအောင်။. ။“CS က အများဆုံးသုံးတဲ့ဟာပါ။ တခြားဟာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ CN တို့ CA တို့ CR တို့ CS ရဲ့ အရှည်နံမယ်က chlorobenzal malononitrile (C10H5ClN2) ပါ။ သူ့ရဲ့ ဓါတုပစ္စည်း ပါဝင်တာ chemical compound ပြောမယ်ဆိုရင် ကာဗွန်က ၁၀ခု၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ၅ခု၊ နောက် ကာဗွန်တခု I နဲ့ နိုင်ထရိုဂျင်လည်း ပါတယ်ဆိုတော့ ပြောချင်တာက သူ့ chemical chain ကြီးက အရှည်ကြီး။ အမှုန့် အနေမျိုး၊ တခါတလေ အရည်ပုံစံမျိုး။ အဲဒါမျိုးကို သူက ဖိအားပေးပြီး သံဗူးလေးထဲမှာ canister ထဲမှာ ထည့်တာမျိုးကို များသောအားဖြင့် လုပ်တတ်တယ်။ သူ့ရဲ့ chain က အရမ်းရှည်တော့ သူ့ကို ခါလိုက်ရုံနဲ့ ပျောက်မသွားတတ်ဖူး။
နောက် သူက ပိုဆိုးတာက စိုစွတ်တဲ့ အရာများကို သူက ပို activate ပိုဖြစ်စေတယ်။ သူက ထိတွေ့ရင် ပိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ပိုပြတဲ့ အခါမှာ လောင်တယ်ပေါ့နော်။ ပူတဲ့ဒဏ် ပိုခံစားရတယ်။ အခုလို မတ်လ မြန်မာပြည်မှာ ပူတဲ့ ရာသီကြီးမှာ ချွေးတွေဘာတွေ ထွက်တဲ့အခါမှာ အကျီလက်ရှည်တွေ ဘာတွေ ဝတ်မထားရင် စိုစွတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ထိရင် လောင်သလိုမျိုး ပိုခံစားရတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ပါးစပ်အကာတို့ မျက်လုံးအကာတို့ မပါဘူး ဆိုရင် နူးညံ့တဲ့ အာခေါင်လေးတွေ ဘာတွေကို ပိုပြီးတော့ လောင်စေတယ်။ အဲဒီတော့ အထိခံရတဲ့ လူက လုံးဝ ခံနိုင်ရည် မရှိပဲနဲ့ သူက အရမ်းကို ပူလောင်သလို ခံစားရပြီးတော့ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ ပဲနဲ့ နှာရည်တွေ ထွက်တာတို့၊ ဘာတို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ CS gas က ပြောရင်တော့ chemical chain က အရှည်ကြီး ဖြတ်ရတောက်ရ အရမ်းခက်တယ်။ သူက စိုစွတ်တဲ့ဟာဆို ပိုကြိုက်တယ်။ ပိုပြီးလောင်စေတယ်။ အဲဒါက အခြေခံပေါ့နော်။”
မေး။. ။“ဒီမျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ ပစ်တဲ့အခါမှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေကို ရေနဲ့ ဖျန်းကြတယ်။ အခု စိုစွတ်ရင် ပိုပြီး ထိခိုက်စေတယ် ဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ တွေ့နေတာက မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ပစ်ပြီဆိုရင် စောင်တွေမှာ ရေဆွတ်တယ်။ ရေဆွတ်ပြီးတော့ ဒီဗုံးတွေကို အုပ်တာတို့၊ အငွေ့တွေ သေအောင်တို့ လုပ်ကြတယ်။ ဒါတွေက နည်းလမ်းမှန်ပါ့မလား။”
ဦးသူရအောင်။. ။“ဒီမှာရှိတဲ့ CDC guideline ပေါ့ ရောဂါကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးဌာန တို့က လမ်းညွှန်ချက်တွေ ပေးတယ်။ သူတို့ကတော့ မျက်ရည်ယိုဗုံး တို့ဘာတို့ ဆိုတာ လူကွဲအောင် လုပ်စေတဲ့အရာဆိုတော့ ထွက်ပြေးဖို့ပဲပြောထားတာ ဆိုတော့ ပြေးပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုး ပြန်လုပ်တယ် ဆိုတာက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ထဲကမှ ဟောင်ကောင်မှာ ပြန်လုပ်တာမျိုးကို တွေ့ဘူးတာကိုး။ သူ့ကို ရေနဲ့ လောင်းလိုက်ပြီးတော့ သေးသိမ်အောင် ( အားပျော့အောင်) လုပ်တာတို့ ပြန်ရိုက်ထုတ်တာ တို့က အန္တရာယ်တော့ များတယ်။ ကျနော့်အသိတယောက် ဆိုရင်လည်း canister ဘူးကို လက်နဲ့ကိုင်လိုက်လို့ လက်ကိုလောင်သွားတာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ အဲဒါကို တင်းနစ်ရိုက်တဲ့ ရိုက်တံနဲ့ ပြန်ရိုက်တာမျိုးလည်း ကျနော် မြင်ရတယ်ပေါ့။ အဲဒါက source လာတဲ့မျက်ရည်ယိုဗုံးကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒီနည်းတွေကတော့ ဒီမှာ အကြံပေး မထားဘူး။ မှားလားဆိုတော့ မမှားဘူး။ အသစ်တွေ ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ကျနော်ပြောတဲ့ စောစောက စိုစွတ်တယ် ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် အသားရည် စိုစွတ်တာမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ပူလောင်တဲ့ဓါတ် ပိုခံရတာပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ချွေးပေနေရင်တို့၊ ကိုယ့်မှာ အကျီလက်ရှည်မပါရင်တို့၊ ကိုယ်က ပါးစပ်တွေ မျက်လုံးတွေကို အုပ်မထားရင်တို့ အဲဒီလိုရှိတာပေါ့း အချိန်မီ မကယ်ရင် လုပ်မပေးနိုင်ရင် လူတွေက မျက်စိကန်းသွားနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိတဲ့ လူတို့ ဆို အာခေါင်ထဲမှာ ပူတာလောင်တာ မခံနိုင်ရင် အသက်ပါတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။”
မေး။. ။“ဒီပစ္စည်းဟာ လူစုကွဲဖို့လုပ်တာ၊ ဒါကို ပြန်ပြီး ခုခံဖို့ မဟုတ်ဖူး။ အသုံးပြုဖို့ မဟုတ်ဖူး။ ဒါကို လူတွေက သုံးနေကြတယ်။ ဒီလိုသုံးနေတဲ့အခါမှာ အန္တရာယ်က ကြီးတယ်ပေါ့နော်။
မျက်ရည်ယိုဗုံးကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ပြောပြပေးပါ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရအောင်။”
ဦးသူရအောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရေတိုနဲ့ ရေရှည် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ်။ ရေရှည်မှာတော့ တချို့သုတေသနတွေက စုံစမ်းဆဲ ပေါ့နော်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်နိုင်တာတွေ ပေါ့နော်။ ရေတိုမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်လဲ ဆိုတော့ ခုနပြောသလို ပူလောင်တယ်။ ပူလောင်စေတာမျိုး ဖြစ်စေတာပေါ့။ ကိုယ့်ကို မီးနဲ့တို့ထားသလို ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ နေပူကြဲကြဲအောက်မှာလည်း ပိုပြီး ခံစားရတယ်။ ကိုယ်က အဲဒါကြီးလောင်နေတဲ့ အခါ နေက ပြင်းပြင်းကြီး ပူနေတဲ့ အခါမှာ ဒါကို ခံစားရတာ ပေါ့နော်။ နောက် မျက်လုံးတွေဘာတွေ ကန်းသွားနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ cornea တွေဘာတွေ မျက်လွှာတွေက အရမ်းကို သေး- ပါးတဲ့ဟာ ဆိုတော့ ဒီလို လောင်တဲ့အခါ blind ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ နောက် မျက်လုံးတွေ ဘာတွေကို မပွတ်ဖို့ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေ ပုံမှန် တုန့်ပြန်တတ်တာကတော့ ဒီလို ပွတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။ အဲဒီလို ပွတ်တဲ့အခါ ပိုဆိုးသွားနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့၊ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ health effect တွေ ပေါ့နော်။”
မေး။. ။“မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုနပြောတာ ရေတိုအတွက် ပေါ့နော်။ ရေရှည်မှရော ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ ဘာအန္တရာယ်တွေရှိလည်း ပြောပြပေးပါ။”
ဦးသူရအောင်။. ။“ရေရှည်အတွက်ကတော့ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ချက်ချင်း အငွေ့တွေ ဘာတွေ မျက်လုံးထဲ ဝင်တာကို မရှင်းနိုင်ရင် သူက activate ဖြစ်နေမှာပဲ။ အခြေနေပိုဆိုးတဲ့ နာသွားတဲ့ ကန်းသွားတဲ့ ဟာမျိုး အထိဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။ နောက် ပါးစပ်ထဲကို ဝင်တာမျိုး ဆိုရင်လည်း အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်တာမျိုးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူက ချွဲတွေဘာတွေ အရမ်းထ။ အဲဒီချွဲကို ပြန်ပြီး activate ဖြစ်ပြီးတော့ ပိုပြီး သူ့ဟာနဲ့သူ ရှုပ်နေပြီးတော့ အပူဓါတ်တွေက အထဲမှာ အရမ်းများပြီးတော့ အက်စမာ ဘာညာ ရှိတဲ့လူမျိုးဆို လေကြောင်း ပိတ်သွားနိုင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ CS gas ကိုကြာကြာ ရှုမိထားတဲ့သူက သူ့မှာ ရင်ကြပ်ရောဂါ ရှိသွားသလား။ မရှိသေးတဲ့သူက ရှိသွားသလား။ ဒီလိုမျိုး စစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ မျက်လုံးကိုလည် ခဏခဏ စစ်နေရမှာပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့ အရေပြား ဘယ်လို ထိသွားသလဲ တို့ဘာတို့။ ဒါက ရေရှည် ကျန်းမာရေး အတွက် ပေါ့နော်။
အင်ဂလန်က သုတေသနပညာရှင် တယောက်က စမ်းတာ။ bio marker ပေါ့နော်။ အဲဒါက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကျောက်ကပ်တို့ အသဲတို့ဘာတို့က ဒီဝင်လာတဲ့ ရှုမိတဲ့ဟာကို ပြန်ထုတ်ပစ်ရတာကိုး။ CS gas ထိပြီးသားလူကို ဆီးစစ်တယ်။ ဆီးထဲမှာ သူက အက်ဆစ်တမျိုး ဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီ CS က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဲဒီလိုမျိုး အက်ဆစ်တွေကို ထုတ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရည်နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ အဲဒီလိုမျိုး လူကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ အက်ဆစ်မျိုး ထုတ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ သူမထွက်ရင်ကော ရေရှည် ကျန်းမာရေး ဘယ်လိုလည်း ဆိုတာ စုံစမ်းနေဆဲပါ။
ဒါ ကမ္ဘာကြီးက CS ကို အဓိကရုန်းနှိမ်နင်းဖို့ riot control အတွက် အန္တရာယ်ူမရှိဘူး safe ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်ထားပေမယ့် ရေရှည် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်နိုင်တာတွေကို ရှာနေဆဲ ပဲပေါ့နော်။ နောက် အခုဒီ CS poison အဆိပ်ထိရင် သူက အခုအချိန်အထိ antidote အဆိပ်ဖြေဆေး ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။”
အမေရိကန်စစ်တပ်က သဘာဝဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံ ဦးသူရအောင်ပါ။ နောက်တပတ်မှာတော့ မျက်ရည်ယိုဗုံးကို ဘယ်လို ခုခံကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ ဒီဓါတုအဆိပ်နဲ့ ထိမိရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ် ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ဒီတပတျတော့ စဈတပျအာဏာသိမျးတာကို လကျမခံပဲ လမျးတှပေျေါဆန်ဒပွနကွေတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှေ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ မကျြရညျယိုဗုံး အန်တရာယျကို ပွောပွပေးမှာပါ။
အဓိကရုနျးနှိမျနငျးရေးမှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ သုံးလရှေိ့တဲ့ မကျြရညျယိုဗုံးကို CS လို့ အတိုကောကျချေါလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီဓါတုပစ်စညျးကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျ ၂ ဦးရဲ့ နာမညျ Corson နဲ့ Stoughton အတိုကောကျကို အစှဲပွုချေါဆိုတာပါ။ ဒီဓါတုဒွပျပေါငျးက ဘယျလိုအလုပျလုပျပါသလဲ။ အမရေိကနျစဈတပျက သဘာဝဝနျးကငျြ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အကွီးအကဲ တဦးဖွဈတဲ့ ဦးသူရအောငျက အခုလို ရှငျးပွ ပါတယျ။
ဦးသူရအောငျ။. ။“CS က အမြားဆုံးသုံးတဲ့ဟာပါ။ တခွားဟာတှလေညျး ရှိသေးတယျ။ CN တို့ CA တို့ CR တို့ CS ရဲ့ အရှညျနံမယျက chlorobenzal malononitrile (C10H5ClN2) ပါ။ သူ့ရဲ့ ဓါတုပစ်စညျး ပါဝငျတာ chemical compound ပွောမယျဆိုရငျ ကာဗှနျက ၁၀ခု၊ ဟိုကျဒရိုဂငျြ ၅ခု၊ နောကျ ကာဗှနျတခု I နဲ့ နိုငျထရိုဂငျြလညျး ပါတယျဆိုတော့ ပွောခငျြတာက သူ့ chemical chain ကွီးက အရှညျကွီး။ အမှုနျ့ အနမြေိုး၊ တခါတလေ အရညျပုံစံမြိုး။ အဲဒါမြိုးကို သူက ဖိအားပေးပွီး သံဗူးလေးထဲမှာ canister ထဲမှာ ထညျ့တာမြိုးကို မြားသောအားဖွငျ့ လုပျတတျတယျ။ သူ့ရဲ့ chain က အရမျးရှညျတော့ သူ့ကို ခါလိုကျရုံနဲ့ ပြောကျမသှားတတျဖူး။
နောကျ သူက ပိုဆိုးတာက စိုစှတျတဲ့ အရာမြားကို သူက ပို activate ပိုဖွဈစတေယျ။ သူက ထိတှရေ့ငျ ပိုပွီးတော့ သူ့ရဲ့ အစှမျးသတ်တိ ပိုပွတဲ့ အခါမှာ လောငျတယျပေါ့နျော။ ပူတဲ့ဒဏျ ပိုခံစားရတယျ။ အခုလို မတျလ မွနျမာပွညျမှာ ပူတဲ့ ရာသီကွီးမှာ ခြှေးတှဘောတှေ ထှကျတဲ့အခါမှာ အကြီလကျရှညျတှေ ဘာတှေ ဝတျမထားရငျ စိုစှတျတဲ့ နရောတှမှော ထိရငျ လောငျသလိုမြိုး ပိုခံစားရတယျ။
အဲဒီအခါမှာ ပါးစပျအကာတို့ မကျြလုံးအကာတို့ မပါဘူး ဆိုရငျ နူးညံ့တဲ့ အာခေါငျလေးတှေ ဘာတှကေို ပိုပွီးတော့ လောငျစတေယျ။ အဲဒီတော့ အထိခံရတဲ့ လူက လုံးဝ ခံနိုငျရညျ မရှိပဲနဲ့ သူက အရမျးကို ပူလောငျသလို ခံစားရပွီးတော့ မထိနျးခြုပျနိုငျတော့ ပဲနဲ့ နှာရညျတှေ ထှကျတာတို့၊ ဘာတို့ဖွဈတာပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ CS gas က ပွောရငျတော့ chemical chain က အရှညျကွီး ဖွတျရတောကျရ အရမျးခကျတယျ။ သူက စိုစှတျတဲ့ဟာဆို ပိုကွိုကျတယျ။ ပိုပွီးလောငျစတေယျ။ အဲဒါက အခွခေံပေါ့နျော။”
မေး။. ။“ဒီမကျြရညျယိုဗုံးတှနေဲ့ ပဈတဲ့အခါမှာ မကျြရညျယိုဗုံးတှကေို ရနေဲ့ ဖနျြးကွတယျ။ အခု စိုစှတျရငျ ပိုပွီး ထိခိုကျစတေယျ ဆိုတော့ မွနျမာပွညျမှာ တှနေ့တောက မကျြရညျယိုဗုံးနဲ့ ပဈပွီဆိုရငျ စောငျတှမှော ရဆှေတျတယျ။ ရဆှေတျပွီးတော့ ဒီဗုံးတှကေို အုပျတာတို့၊ အငှတှေ့ေ သအေောငျတို့ လုပျကွတယျ။ ဒါတှကေ နညျးလမျးမှနျပါ့မလား။”
ဦးသူရအောငျ။. ။“ဒီမှာရှိတဲ့ CDC guideline ပေါ့ ရောဂါကူးစကျမှုထိနျးခြုပျရေးဌာန တို့က လမျးညှနျခကျြတှေ ပေးတယျ။ သူတို့ကတော့ မကျြရညျယိုဗုံး တို့ဘာတို့ ဆိုတာ လူကှဲအောငျ လုပျစတေဲ့အရာဆိုတော့ ထှကျပွေးဖို့ပဲပွောထားတာ ဆိုတော့ ပွေးပေါ့နျော။ ဒီလိုမြိုး ပွနျလုပျတယျ ဆိုတာက ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈထဲကမှ ဟောငျကောငျမှာ ပွနျလုပျတာမြိုးကို တှဘေူ့းတာကိုး။ သူ့ကို ရနေဲ့ လောငျးလိုကျပွီးတော့ သေးသိမျအောငျ ( အားပြော့အောငျ) လုပျတာတို့ ပွနျရိုကျထုတျတာ တို့က အန်တရာယျတော့ မြားတယျ။ ကနြေျာ့အသိတယောကျ ဆိုရငျလညျး canister ဘူးကို လကျနဲ့ကိုငျလိုကျလို့ လကျကိုလောငျသှားတာတို့ ဘာတို့ ဖွဈခဲ့ဘူးတယျ။ အဲဒါကို တငျးနဈရိုကျတဲ့ ရိုကျတံနဲ့ ပွနျရိုကျတာမြိုးလညျး ကနြျော မွငျရတယျပေါ့။ အဲဒါက source လာတဲ့မကျြရညျယိုဗုံးကို ဖယျထုတျလိုကျတာမြိုးပေါ့။ အဲဒီနညျးတှကေတော့ ဒီမှာ အကွံပေး မထားဘူး။ မှားလားဆိုတော့ မမှားဘူး။ အသဈတှေ ဖွဈနတောပေါ့နျော။ ကနြျောပွောတဲ့ စောစောက စိုစှတျတယျ ဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျ အသားရညျ စိုစှတျတာမှာ ခန်ဓာကိုယျက ပူလောငျတဲ့ဓါတျ ပိုခံရတာပေါ့။ ကိုယျ့မှာ ခြှေးပနေရေငျတို့၊ ကိုယျ့မှာ အကြီလကျရှညျမပါရငျတို့၊ ကိုယျက ပါးစပျတှေ မကျြလုံးတှကေို အုပျမထားရငျတို့ အဲဒီလိုရှိတာပေါ့း အခြိနျမီ မကယျရငျ လုပျမပေးနိုငျရငျ လူတှကေ မကျြစိကနျးသှားနိုငျတယျ။ နောကျပွီး ပနျးနာရငျကွပျရှိတဲ့ လူတို့ ဆို အာခေါငျထဲမှာ ပူတာလောငျတာ မခံနိုငျရငျ အသကျပါတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ ခငျဗြ။”
မေး။. ။“ဒီပစ်စညျးဟာ လူစုကှဲဖို့လုပျတာ၊ ဒါကို ပွနျပွီး ခုခံဖို့ မဟုတျဖူး။ အသုံးပွုဖို့ မဟုတျဖူး။ ဒါကို လူတှကေ သုံးနကွေတယျ။ ဒီလိုသုံးနတေဲ့အခါမှာ အန်တရာယျက ကွီးတယျပေါ့နျော။
မကျြရညျယိုဗုံးကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အန်တရာယျ ပွောပွပေးပါ။ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ သိရအောငျ။”
ဦးသူရအောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့။ မကျြရညျယိုဗုံးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ရတေိုနဲ့ ရရှေညျ ဖွဈနိုငျတဲ့ အန်တရာယျဆိုပွီး ၂ မြိုးရှိတယျ။ ရရှေညျမှာတော့ တခြို့သုတသေနတှကေ စုံစမျးဆဲ ပေါ့နျော။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ထိခိုကျနိုငျတာတှေ ပေါ့နျော။ ရတေိုမှာ ဘာတှေ ဖွဈနိုငျလဲ ဆိုတော့ ခုနပွောသလို ပူလောငျတယျ။ ပူလောငျစတောမြိုး ဖွဈစတောပေါ့။ ကိုယျ့ကို မီးနဲ့တို့ထားသလို ဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ နပေူကွဲကွဲအောကျမှာလညျး ပိုပွီး ခံစားရတယျ။ ကိုယျက အဲဒါကွီးလောငျနတေဲ့ အခါ နကေ ပွငျးပွငျးကွီး ပူနတေဲ့ အခါမှာ ဒါကို ခံစားရတာ ပေါ့နျော။ နောကျ မကျြလုံးတှဘောတှေ ကနျးသှားနိုငျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ cornea တှဘောတှေ မကျြလှာတှကေ အရမျးကို သေး- ပါးတဲ့ဟာ ဆိုတော့ ဒီလို လောငျတဲ့အခါ blind ဖွဈသှားနိုငျတယျ။ နောကျ မကျြလုံးတှေ ဘာတှကေို မပှတျဖို့ ပွောထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတှေ ပုံမှနျ တုနျ့ပွနျတတျတာကတော့ ဒီလို ပှတျလိုကျတာမြိုးပေါ့နျော။ အဲဒီလို ပှတျတဲ့အခါ ပိုဆိုးသှားနိုငျတာတှေ ရှိတယျ။ ဒါတှကေတော့ ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့၊ ဖွဈလညျး ဖွဈနတေဲ့ health effect တှေ ပေါ့နျော။”
မေး။. ။“မကျြရညျယိုဗုံးနဲ့ပတျသကျပွီး ခုနပွောတာ ရတေိုအတှကျ ပေါ့နျော။ ရရှေညျမှရော ဘာတှဖွေဈနိုငျသလဲ ဘာအန်တရာယျတှရှေိလညျး ပွောပွပေးပါ။”
ဦးသူရအောငျ။. ။“ရရှေညျအတှကျကတော့ ကနြျောပွောခဲ့သလိုပဲ ခကျြခငျြး အငှတှေ့ေ ဘာတှေ မကျြလုံးထဲ ဝငျတာကို မရှငျးနိုငျရငျ သူက activate ဖွဈနမှောပဲ။ အခွနေပေိုဆိုးတဲ့ နာသှားတဲ့ ကနျးသှားတဲ့ ဟာမြိုး အထိဖွဈသှားနိုငျတာပေါ့နျော။ နောကျ ပါးစပျထဲကို ဝငျတာမြိုး ဆိုရငျလညျး အသကျရှုလမျးကွောငျး ပိတျတာမြိုးတှေ ဘာတှေ ဖွဈနိုငျတာပေါ့။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူက ခြှဲတှဘောတှေ အရမျးထ။ အဲဒီခြှဲကို ပွနျပွီး activate ဖွဈပွီးတော့ ပိုပွီး သူ့ဟာနဲ့သူ ရှုပျနပွေီးတော့ အပူဓါတျတှကေ အထဲမှာ အရမျးမြားပွီးတော့ အကျစမာ ဘာညာ ရှိတဲ့လူမြိုးဆို လကွေောငျး ပိတျသှားနိုငျတယျ။ နောကျပွီးတော့ CS gas ကိုကွာကွာ ရှုမိထားတဲ့သူက သူ့မှာ ရငျကွပျရောဂါ ရှိသှားသလား။ မရှိသေးတဲ့သူက ရှိသှားသလား။ ဒီလိုမြိုး စဈရမယျပေါ့နျော။ မကျြလုံးကိုလညျ ခဏခဏ စဈနရေမှာပေါ့နျော။ သူ့ရဲ့ အရပွေား ဘယျလို ထိသှားသလဲ တို့ဘာတို့။ ဒါက ရရှေညျ ကနျြးမာရေး အတှကျ ပေါ့နျော။
အငျဂလနျက သုတသေနပညာရှငျ တယောကျက စမျးတာ။ bio marker ပေါ့နျော။ အဲဒါက လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲက ကြောကျကပျတို့ အသဲတို့ဘာတို့က ဒီဝငျလာတဲ့ ရှုမိတဲ့ဟာကို ပွနျထုတျပဈရတာကိုး။ CS gas ထိပွီးသားလူကို ဆီးစဈတယျ။ ဆီးထဲမှာ သူက အကျဆဈတမြိုး ဖွဈလာစတေယျပေါ့နျော။ အဲဒီ CS က ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဲဒီလိုမြိုး အကျဆဈတှကေို ထုတျနိုငျမယျ ဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အရညျနဲ့ ပေါငျးပွီးတော့ အဲဒီလိုမြိုး လူကို အန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့ အကျဆဈမြိုး ထုတျနိုငျမယျ ဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲကနေ သူမထှကျရငျကော ရရှေညျ ကနျြးမာရေး ဘယျလိုလညျး ဆိုတာ စုံစမျးနဆေဲပါ။
ဒါ ကမ်ဘာကွီးက CS ကို အဓိကရုနျးနှိမျနငျးဖို့ riot control အတှကျ အန်တရာယျူမရှိဘူး safe ဖွဈတယျဆိုပွီး ထုတျလုပျထားပမေယျ့ ရရှေညျ ကနျြးမာရေးအတှကျ ထိခိုကျနိုငျတာတှကေို ရှာနဆေဲ ပဲပေါ့နျော။ နောကျ အခုဒီ CS poison အဆိပျထိရငျ သူက အခုအခြိနျအထိ antidote အဆိပျဖွဆေေး ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။”
အမရေိကနျစဈတပျက သဘာဝဝနျးကငျြကနျြးမာရေးတာဝနျခံ ဦးသူရအောငျပါ။ နောကျတပတျမှာတော့ မကျြရညျယိုဗုံးကို ဘယျလို ခုခံကာကှယျရမယျ ဆိုတာနဲ့ ဒီဓါတုအဆိပျနဲ့ ထိမိရငျ ဘာလုပျရမယျဆိုတာတှကေို ဆကျပွီးပွောပွပါမယျ ဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။